शरीर कमजोर भएजस्तो हुन्छ ? त्यसो हो भने यस्ता खानेकुरा खानुहोस् र मजबुत शरीर बनाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
स्वस्थ्य रहनु शरीरको स्वभाविक अवस्था हो । रोग, विकार, कष्ट, दुख वा दुर्बलता अस्वभाविक अवस्था हो । प्रकृति व्यवस्थाको उल्लंघनको कारण यस्तो हुन्छ ।
प्राकृतिक खानाको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । प्याकेजिङ, रिफाइन गरिएका र रेस्टुरेन्टका खानेकुराले स्वास्थ्यलाई हानि पुयाउँछ । मानव शरीरका फरक-फरक अंगका लागि फरक-फरक पोषणको आवश्यकता हुन्छ ।
फरक-फरक अंगका लागि फरक-फरक पोषण :
कपालका लागि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन भएमा मात्र कपाल स्वस्थ रहन्छ । माछा, मासु, गेडागुडी, दूध, अन्डाजस्ता खाद्यपदार्थमा प्रोटिनको मात्रा हुन्छ ।
मानिसको ६० प्रतिशत मस्तिष्क बोसोले बनेको हुन्छ । त्यसैले मस्तिष्कका लागि ‘गुड फ्याटी एसिड’को अवश्यकता हुन्छ । जसमा पर्छ ‘ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड’ । त्यसैले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न माछा, ओखर, भाङ्गोलगायतका खाद्यपदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आँखाका लागि भिटामिन ए सबैभन्दा उत्तम पौष्टिक तत्व हो । हेर्दा पहेँलो देखिने खाद्यपदार्थमा भिटामिन ए हुन्छ । जस्तो कि गाँजर, मेवा, आँप, सखरखण्ड, अन्डाको पहेँलो भाग, कलेजो आदि ।
दाँतको स्वास्थ्यका लागि हामीले कहिल्यै पनि प्याकेजिङ गरिएका पेय पदार्थ प्रयोग गर्नुहुँदैन । बरु फ्रेस जुसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । केरा, स्याउलगायतका फलफूलले पनि दाँतलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ ।
फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न एन्टिअक्सिडेन्टको बढी मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ । ब्रोकाउली, पालुंगोको साग, कालो अंगुर, किम्बुजस्ता खाद्यपदार्थबाट एन्टिअक्सिडेन्ट प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, फोक्सोका लागि प्रोटिनको पनि त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ ।
मुटुलाई दुई तरिकाले असर पारिरहेको हुन्छ । एउटा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएर र अर्को ब्लडप्रेसरका कारण । ब्लडप्रेसर नियन्त्रणका लागि पोटासियम सेवन गर्नुपर्छ । केरा, सागपात, पालुंगो, टमाटर, एभोकाडो, नरिवलको पानी आदिमा पोटासियमको मात्रा निकै हुन्छ । त्यस्तै, कोलेस्ट्रोल सन्तुलित राख्न ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड र एन्टिअक्सिडेन्टको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मिर्गौलाका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित तरिकाले जीवनयापन गर्ने मानिसको पनि मिर्गौला फेल हुन सक्छ । किनकि, उनीहरूले निकै धेरै प्रोटिनको सेवन गरिरहेका हुन्छ । आवश्यकभन्दा बढी प्रोटिनले पनि मिर्गौलामा असर पार्ने गर्छ । त्यस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचापका कारण पनि मिर्गौलामा असर पर्न जान्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ मिर्गौलाका लागि राम्रोसँग पच्न सक्ने खानाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हाडलाई चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको क्याल्सियम हो । जुन दूध र दूधजन्य पदार्थबाट अत्यधिक पाइन्छ । यसबाहेक ब्रोकाउली, आल्मन्डलगायतबाट पनि क्याल्सियम पाइन्छ । हाडका लागि चाहिने अर्को तत्व भनेको फसफोरस हो । जुन दूध, दही, माछा, मासु, गेडागुडीलगायतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
छालालाई स्वस्थ राख्न इसेन्सियल फ्याटी एसिडको आवश्यकता हुन्छ । जुन तोरी, भटमासको तेल, ओखर, आल्मन्डमा भरपुर हुन्छ । यस्तो पौष्टिक तत्वले छालामा चमक ल्याउने काम गर्छ । त्यस्तै, चाँडै चाउरी पर्ने र दाग देखिने समस्याका लागि एन्टिअक्सिडेन्टको आवश्यकता हुन्छ । जुन कालो अंगुर, गाँजर, कागती, दालचिनी, तुलसी, ग्रिन टी आदिबाट प्राप्त हुन्छ ।
खानपानसम्बन्धी यी कुरा बुझ्नैपर्छ :
शरिरमा पानीको मात्रा सन्तुलन गर्न कुन कुन खाद्यपदार्थ उपयुक्त हुन्छन् ?
-प्रशस्त मात्रामा उमालेको पानी
-नुनिलो झोल पदार्थ
-कागती पानी र नुन चिनी पानी सकेसम्म धेरै खानु पर्छ
-गर्मी धेरै भए सातु, सर्बत, बाबरीको अचार वा पानीमा बाबरी भिजाएर या मोहीमा बाबरी घोलेर खाए पनि शरीरलाई शितल पुग्छ
-घरको बनाईएको दाल भातसँगै प्रशस्त पानी पाइने फलफूल तथा हरियो र ताजा सागसब्जी तथा सफा पानीले धोएको सलाद खानु पर्छ ।
-पेय पदार्थ र चिया कफीको साटो नरीवलको पानी, लस्सी, मोही, बाबरी राखेर उमालेको पानी, उखुको जुस खाए शरीरलाई फाइदा पुग्छ । यस्तै खानेकुरा अपच भए कागती पानी वा बाबरी हालेको पानी पिउनुपर्छ ।
-जाँड रक्सी र सूर्तिजन्य पदार्थ तथा जंक फुड (चाउचाउ, लेज, कुरकुरे लगायत) नखाने
-प्याकेटका जुस, रेडबुल, फान्टा, कोकाकोलाजस्ता पेय पदार्थ
-बाँसी, सढेगलेका खानेकुरा, चिल्लो पीरो, धेरै दिनसम्म फ्रिजमा राखेको खानेकुरा नखादा राम्रो ।
पेय पदार्थमा मानिसको शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै चिनीको मात्रा हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक जना पुरुषलाई ९ र महिलाको शरीरलाई ६ चम्चा चिनी आवश्यक पर्छ । तर यस्ता पेय पदार्थमा १० चम्चा चिनीको मात्रा हुने संगठनले जनाएको छ ।
मानिसले पेय पदार्थसँगै दिनमा अरु मिठाईयुक्त (गुलियो मिसिएको खानेकुरा) खाने गरेकाले शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न जान्छ । जसका कारण मधुमेह, मुटुको रोग, रक्तचापमा समस्या जस्ता नसर्ने गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्ने जोखिम उच्च हुन्छ ।
यदि हिँडडूल गर्दा साथमा पानी बोकेको छैन भने कालो चिया पिउन सकिन्छ । कालो चियाले स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन । पेय पदार्थसँगै बाहिरी खाने कुरा नखाए पनि रोग लाग्न पाउँदैन ।
शरीरलाई मजबुत बनाउन के खाने ?
आफ्नो नियमित डाइटमा तपाईंले केही खानेकुराहरू समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी खानेकुराले शरीरलाई भित्रैबाट बलियो बनाउँछन् ।
१. ड्राई फ्रुट
काजु, बदाम, पेस्ता जस्ता ड्राई फ्रुट नियमित खाने मानिसको मांसपेशी बलियो हुन्छ ।
दूध, दही, लस्सी, पनीर र मक्खनमा प्रोटीन, क्याल्सियम, भिटामिन ए जस्ता पोषक तत्व विद्यमान हुन्छन् । यसबाट मांसपेशी मजबुत हुन्छन् ।
३. मुंगफली बदाम
बदाममा हुने अम्ल र जिंकले कमजोरी हटाउन मद्दत गर्छ ।
सोयाबीनमा भरपूर प्रोटीन हुन्छ । सोया मिल्क र पनीरलाई नियमित डाइट बनाउनुस् ।
फर्सीमा भएको भिटामिन, खनिज र एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरलाई तागतिलो बनाउँछ ।
गर्मी मौसममा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । गर्मी मौसममा शरीरमा बिभिन्न रोगहरुले आक्रमण गर्न सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले यस समयमा शरीरको बिशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि के गर्ने ?
गर्मी मौसममा शरीरलाई पानीको बढी आवश्यकता पर्दछ त्यसैले बिहान उठ्नासाथ प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । जसले शरीरमा रहेको बिकार पदार्थहरु बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र शरीरमा रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यो समयमा चिया तथा कफिको सेवन कम गर्नु राम्रो हुन्छ ।
२. नरिवल पानी :
गर्मी मौसममा नरिवलको पानी पिउने गर्नाले शरीर।लाई शीतलता प्रदान गर्छ । यसले शरीरलाई निकै फाइदा गर्छ । यसका साथै दहीको सेवन गर्नु पनि उत्तम हुन्छ । दहीमा एन्टीबायोटिक हुन्छ जसले शरीरमा पाचन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ ।
३. फलफूल :
गर्मी मौसममा मौसम अनुसारका फलफूल प्रशस्त मात्रामा खानाले शरीरलाई निकै फाइदा गर्छ । यसबाट शरीरलाई चाहिने पोषक तत्व प्राप्त हुन्छ र शरीर स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ ।
४. चना :
गर्मी मौसममा चनाको सेवन गर्नाले शरीरलाई शीतलला प्रदान गर्नुका साथै शरीरमा शक्ति पैदा गर्छ । यसको सेवनले शरीरलाई गर्मी बाट बचाउँछ ।
५. धनिया, पुदिना तथा प्याज :
गर्मी मौसममा पाचन क्रियामा समस्या हुने भएकाले धनिया, पुदिना तथा प्याजको सेवन गर्नाले खाना पचाउन मद्दत गर्छ साथै यसले खानालाई स्वादिलो पनि बनाउँछ ।
Don't Miss it के तपाइँलाइ थाहा छ ? आफ्नै भान्सामा यस्ता औषधीय गुणहरु पाइन्छ – जानौं कुन कुरामा के औषधीय गुण छ ?
Up Next तपाईंको आँखाबाट आँशु नै आएन भने के होला ? यसबारे जानाैँ
स्ट्रेस हुँदा अपनाउनुस यस्ता उपयोगी उपायहरु
दिनदिनै हामि व्यस्त हुने गर्छौ । हरेक दिन केहि न केहि नया नया कमहरु हामीले गरिरहेका हुन्छौ। जसले हाम्रो जीवनमा स्ट्रेस…